Imiski Ebusayo Elahliwe, Amakhethini weNonwoven, Amagilavu ​​e-Pvc - Xinyuanjiaye
Amagilavu ​​e-pvc wesandla se-M1013 ephezulu ye-pvc ...
Umkhiqizi We-Disposable Onelukhuni Onalukelwanga ...
Imikhiqizo ifaka phakathi: imaski yokuvikela elahlekayo, imaski yokulahleka kokulahlwa, imaski yokugoqa (i-KN95), njll, ukumboza ukunakekelwa kwezempilo, imboni yokudla neyamakhemikhali, imishini ye-elekhthronikhi, imboni yamakhemikhali emihle kanye nezinye izimboni ezihlobene, eziye zathola udumo oluvela kubantu abanokuqondisisa ku imboni. Imikhiqizo ikhiqizwa ngokuya ngamazinga afanele asekhaya nawezwe lonke, futhi imikhiqizo ethunyelwa kwamanye amazwe ihlangabezana nezidingo zokuthola isitifiketi ze-EU CE ne-US FDA. Njengomunye wemikhiqizo emisha ehamba phambili embonini yemaski, sinekamelo elicocekile elinamazinga ayi-100,000 nemishini yokukhiqiza ethuthukile, ukuphathwa kwamabhizinisi okuqinile, futhi sinikeze abathengi imikhiqizo esezingeni eliphakeme futhi ezinzile. Imikhiqizo yathunyelwa eYurophu, e-Afrika, eCanada, eJapan, Southeast Asia nakwezinye izindawo
Ngemibuzo ngemikhiqizo yethu noma nge-pricelist, sicela ushiye futhi sizoxhumana phakathi namahora angama-24.
Umugqa wokukhiqiza ozenzakalelayo kanye no-othomathikhi
Cishe bayi-100 abasebenzi
2700 metres metres
Ihambisane nesitifiketi se-EU CE ne-US FDA
Imaskhi evikela ukuthengiswa Imaski evikelekile ifaka imaski yokuzivikela yansuku zonke kanye nemaski yokuvikela yezempilo Imaski yokuvikela nsuku zonke The
Imaskhi evikela ukuthengiswa Imaski yokuzivikela ifaka imaski yokuzivikela yansuku zonke kanye nemaski yokuvikela yezempilo Imaski yokuvikela nsuku zonke Umzimba wemaskhi wemaski wokuvikela nsuku zonke wenziwe ngezinto zokuhlunga. Imaski yokuvikela nsuku zonke ihlukaniswe kakhulu ngamaski othuli namamaski we-anti-virus. Amaski othuli ane-protec ...
AmaMasks we-KN95 Okwamanje, ukugqoka imaski yezokwelapha kubhekwa njengenye yezindlela eziphumelelayo zokuvimbela ukusakazeka kwe-COVID-19. Kodwa-ke, kunezinhlobo eziningi zemaski. Izinhlobo ezahlukene zemaski zingavimba i-COVID-19 ngempumelelo njenge-KN95. Uma isisebenzi sezokwelapha nomuntu esivame ukungena ngenzalo ephezulu
Phinda usebenzise i-N95 Mask Coronavirus isatshalaliswa isuka komunye umuntu iye komunye, lapho umuntu ehlangana nokufihlakala komuntu onegciwane. Ukungasebenzi kwegciwane kuthinta indlela yokudlulisela ngqo. Ukugqoka imaskhi kungakuvimbela ekuphefumuleni igciwane emacongeni ngqo.Khumbula w ...